Wararka - haynta ujeedka asalka ah iyo raadinta horumar badan
Mudane Meng Lingwen had iyo jeer waxaa la weydiiyaa "Sidee shirkadu adigu u aasaastay oo aad u gashay suuqa caalamiga ah maadama aad tahay hiwaayad cilmiga bayoolajiyada" .Wuxuu yiri wax yar kadib "Samee wanaaga, ha waydiin mustaqbalka". Wuxuu noo sharaxay, isagoo ku saleynaya waqtiga aan joogno iyo inaan si taxaddar leh u sameyno wax kasta oo yar oo hor yaalla haddii annaga, waxaan u dhaqaaqi karnaa si isdaba joog ah tallaabo tallaabo ah, waxaanan leenahay kalsooni iyo xoog aan diiradda saarno mustaqbalka. Marka labaad, hoggaamiyeyaasha shirkaddu waa inay lahaadaan qaab wanaagsan iyo dareenka mas'uuliyadda. Horumarinta firfircoon ee shirkadaha waxay kuxirantahay siyaasada wanaagsan ee dalka, iyo kalsoonida iyo taageerada shacabka badan. Markay shirkaddu si wanaagsan u horumariso, waxay dib ugu noqon doontaa bulshada. Marka bulshadu dhibaato ku jirto, waxay sidoo kale caawinaysaa kuwa ugu fiican
Horumarka wanaagsan ee shirkada waxaa aqoonsaday dhamaan heerarka dowladaha hoose. Sannadkii 2015, waxaa loo aqoonsaday "Hebei Science and technology SMEs" Waaxda sayniska iyo teknolojiyadda ee Gobolka Hebei; Sanadkii 2016, waxaa aqoonsaday Ururka Dhiirrigelinta Amaahda Hebei iyo Machadka Cilmi-baarista Dhibcaha ee Hebei "qandaraas u hoggaansanaanta iyo qiimeynta amaahda ee Gobolka Hebei"; Bishii Febraayo 2016, waxay dhaaftay shahaadada nidaamka ISO13485 waxayna heshay shahaadada CE; Laga soo bilaabo 2018 illaa 2019, shirkaddu waxay si isdaba-joog ah ugu guuleysatay Abaalmarinta Hoggaanka Hal-abuurnimada iyo hal-abuurnimada ee ay soo saartay dowladda hoose ee Gaobeidian; Sannadkii 2019, waxay ku guuleysatay shahaado-siinta shirkad tiknoolajiyad sare ah oo ay soo saartay Waaxda sayniska iyo teknoolojiyadda ee Gobolka Hebei; Sanadkii 2020, waxaa lagu taliyay in loo noqdo "Hebei '3.15' tayada muujinta adeegga tayada"
Intii uu hoggaaminayey Mr. Meng Lingwen, PRISES Biotechnology waxay sii waddaa inay ballaariso saamaynta ay ku leedahay bulshada, garbaha ka saarto masuuliyadeeda bulsheed waxayna u abuurtaa qiimo bulshada. Dhanka kale, waxaan sii wadi doonnaa inaan la jaanqaadno waqtiyada oo aan baranno tikniyoolajiyadda casriga ah, ku sameynno cilmi baaris qoto dheer dalabka suuqa caafimaadka, si adag u xakameyno tayada wax soo saarka, kobcino tamar cusub oo cusub, hagaajinno awoodda noo gaar ah, soo bandhigno soo jiidashada astaantayada, iyadoo la ballaarinayo suuqa caalamiga ah, u ogolow soosaarka Shiinaha ee "smart" inuu u baxo adduunka ...